Fivarotana tanim-panjakana: mitaky ny marina momba ny “Villa Elisabeth” ny mpiasan’ny fananan-tany | NewsMada
Fivarotana tanim-panjakana: mitaky ny marina momba ny “Villa Elisabeth” ny mpiasan’ny fananan-tany
Nivoaka amin’ny fanginany manoloana ny “Raharaha Villa Elisabeth” ny eo anivon’ny fitantanana sy ny sampan-draharahan’ny fananan-tany. Namory mpanao gazety izy ireo ary nanitrikitrika fa tsy tokony hijanona amin’izao ity raharaha ity.
“Maro ireo olona tokony antsoina hiatrika fitsarana. Hahitantsika ny marina ny fiatrehan’izy ireo izany satria tsy ny sampandraharahan’ny fananan-tany ihany ny mikirakira ny antontan-taratasy momba ireo raharaha ireo : “Villa Elisabeth”, ireo zaridaina… , hoy izy ireo, omaly. Nohitsin’izy ireo fa nanatanteraka baiko fotsiny ihany ireo mpiasa ireo fa mbola miriaria any ny tompon’andraikitra voalohany momba ireo raharaha ireo. Anisan’ny tsy tokony ho afa-bela ireo nampanao ny sonia sy ny nanao kolikoly. “Tsy voasazy na voantso. Voasazy avy hatrany kosa ny nanatanteraka ny baiko”, hoy ihany izy ireo. Nanterin’ireto mpiasan’ny fananan-tany ireto fa voatazona am-ponja vonjimaika ny mpiasa naman’izy ireo noho ny fikirakirana ireo antontan-taratasy ireo. Tsy nandositra izy ireo fa naneho fahavononana niatrika ny fitsarana. Mbola vonona koa ny hiatrika ny andraikiny ao anatin’izany.
Olobe na tompon’andraikitra ambony hafa…
Na izany aza, niaiky izy ireo fa misy tokony harenina tokoa eo anivon’ny sampandraharahan’ny fananan-tany. “Efa manao izany ny minisitera amin’izao fotoana izao mba tsy hiverenan’ny tahaka izao intsony amin’ny alalan’ny fandaminana vaovao sy ny fomba fiasa”, hoy ihany ireto mpiasan’ny fananan-tany ireto.
Araka izany, tsy tokony hijanona eo ny fanadihadiana sy ny famotorana momba ireo tanim-panjakana ireo satria ahina mety mbola hisy olobe na tompon’andraikitra ambony hafa sy ambony kokoa tsy tokony ho afa-bela amin’ireo raharaha ireo.